क्याम्ब्रिजको संस्कृत पाठ्यक्रम नेपालमा अध्यापन - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
क्याम्ब्रिजको संस्कृत पाठ्यक्रम नेपालमा अध्यापन
काठमाडौँ । विश्वका चर्चित विश्वविद्यालयले संस्कृत अध्यापनलाई उच्च महत्व दिन थालेपछि नेपालका केही विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित संस्कृतको पठनपाठन थालेका छन्। नेपालका तीन विद्यालयले बेलायतस्थित क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको संस्कृत पाठ्यक्रम पढाउन सुरु गरेका हुन् ।
लन्डनस्थित सेन्ट जेम्स इन्डिपेन्डेन्ट स्कुलको सहकार्यमा चार वर्षदेखि क्याम्ब्रिजको आइजिसिएसई लेभलको संस्कृत पाठ्यक्रम पढाउन थालिएको हिन्दु विद्यापीठ नेपालका संस्थापक डा. चिन्तामणि योगीले बताए। यस वर्षदेखि जाउलाखेलस्थित डिएभी र गोकर्णस्थित कान्तिभैरवले पनि उक्त पाठ्यक्रम पढाउन थालेका छन्। ‘हामीले विगत चार वर्षदेखि सेन्ट जेम्सको सहकार्यमा संस्कृत पढाउँदै आएका थियौं। यस वर्षदेखि अन्य दुई विद्यालयले पनि सुरु गरेका छन्,’ योगीले नागरिकसँग भने।
सेन्ट जेम्सले संस्कृत तथा पूर्वीय दर्शन अध्यापन गराउँदै आएको छ। बेलायतसाथै अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड, वेस्ट इन्डिज र अमेरिकामा सञ्चालनमा रहेको उक्त स्कुलले ए लेभलमा संस्कृत अनिवार्य विषयका रुपमा पठनपाठनको व्यवस्था गरिएकोे योगी बताउँछन्। नेपालमा हिन्दु विद्यापीठ नेपालले उक्त स्कुलसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। नेपालमा कक्षा ९ अध्ययनरत विद्यार्थीले संस्कृतमा आइजिसिएसई अध्ययन गरिरहेका छन्।
आइजिसिएसईलाई ‘ओ’ लेभल समान मानिन्छ, जुन ए लेभलभन्दा पहिले पढाइ हुन्छ। क्याम्ब्रिजले तयार पारेको संस्कृत पाठ्यक्रममा महाभारत, रामायण तथा वेद र उपनिषद् अध्यापन गराइन्छ। यसमा वेद–उपनिषद्का सूत्रलाई जीवनमा कसरी लागू गर्ने भन्ने पनि सिकाइन्छ। ‘यो परम्परागत ढंगले संस्कृतका श्लोक घोक्ने मात्र नभई त्यसलाई आफ्नो जीवनमा कसरी लागू गर्ने भन्ने सिकाइन्छ,’ योगीले भने।
योगीका अनुसार हाल नेपाली विद्यालयमा अध्यापन हुने संस्कृत विषयको आइजिसिएसई परीक्षा ब्रिटिस काउन्सिलले सञ्चालन गर्दै आएको छ। संस्कृतको मात्र पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था रहे पनि यसका लागि अंग्रेजी जान्न अनिवार्य रहेको योगी बताउँछन्।
परीक्षामा अंग्रेजीमा सोधिएका प्रश्नको संस्कृत र संस्कृतमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर अंग्रेजीमा दिनुपर्छ। यो परीक्षा पास गर्ने विद्यार्थीलाई क्याम्ब्रिजले छुट्टै प्रमाणपत्रसमेत दिन्छ। विद्यार्थीलाई दुवै भाषामा सहज ढंगले अध्यापनका लागि अंग्रेजी र संस्कृतका जानकारबाटै संस्कृत अध्यापन गराइरहेको योगीले बताए। ‘विद्यार्थीलाई दुवै भाषामा सहज ढंगले अध्यापन गराउन दुवै भाषामा दख्खल राख्ने शिक्षकको व्यवस्था गरेका छौं,’ योगीले भने।
पछिल्लो समय नेपालमा संस्कृतलाई मृत तथा वर्ग विशेषको भाषाका रूपमा अपव्याख्या गरिँदा यसको अध्ययन–अध्यापन खुम्चिँदै गएको छ। संस्कृत जस्तो समृद्ध भाषा र जीवनदर्शनलाई नेपालमा बेवास्ता गरिए पनि पश्चिमी मुलुकहरूले भने यसलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। विदेशीले संस्कृत भाषाको महिमा बुझे तर हामीले आफ्नै जननी भाषाको महŒव बुझ्न नसकेको यसका अध्येता बताउँछन्। हामीले ‘माल पाएर पनि चाल पाउन नसकेको’ संस्कृतको महिमा विदेशीले बुझेर विश्वविद्यालय तहसम्म पढाउन थालेको योगी बताउँछन्। संस्कृत भाषा मात्र नभएर जीवनदर्शन हो भन्ने पश्चिमाले महसुस गरिसकेकाले नेपालमा जीवनदर्शनसँग जोडेर यसको पढाइ सुरु भएको उनको तर्क छ। ‘हामी परम्परागत घोकन्ते शैलीको संस्कृत होइन, प्रयोगात्मक संस्कृतको अभ्यास गराइरहेका छौं। त्यसैका लागि विदेशी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अध्यापन गराएका हौं,’ योगीले भने।
पूर्वीय दर्शनमा आधारित धर्म, संस्कृति र सभ्यता संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २०४२ सालमा योगीको अगुवाइमा स्थापित हिन्दु विद्यापीठ नेपाल अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने स्कुल हो। यहाँ नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म संस्कृत पनि अध्यापन गराइन्छ। विद्यापीठले पढाउँदै आएको र क्याम्ब्रिजको संस्कृत पाठ्यक्रममा समानता भएकाले क्याम्ब्रिज कोर्स पढाउन थालिएको योगीले बताए।
नेपालमा अनिवार्य विषयका रूपमा पढाइ हुँदै आएको संस्कृत दसवर्षे माओवादी द्वन्द्वका बेला अधिकांश स्कुलबाट हटाइयो। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बुर्जुवा शिक्षा भन्दै संस्कृतलाई विद्यालबाट हटाउन धम्की दिएपछि सरकारी स्कुलले संस्कृत पढाउन बन्द गरे। २०६३ सालमा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि संस्कृत शिक्षाको पुनः पढाइ सुरु गरिए पनि यसले व्यापकता लिन सकेको देखिँदैन। योगी भन्छन्, ‘हाम्रो संस्कृति विश्वभर फैलाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धर्मसंस्कृतिको प्रचार गर्न संस्कृत पढाइ थालेका हौं। पछिल्लो समय नेपालका स्कुलमा पनि संस्कृत शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ, जुन सकारात्मक हो।’ अाजको नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।
मेडिकल शिक्षामा सुधारको संकेत, योग्यता सूची र तोकिएकै शुल्कमा धमाधम भर्ना
काठमाडौं । गत वर्षसम्म एमबीबीएसको तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिएको गुनासो चौतर्फी आएको थियो । मेरिटका आधारमा […]
सत्ताको आयु लम्बाउन के–के गर्दै छन् देउवाले ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १९ भदौ २०७४ मा ७ माघ २०७४ भित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको […]
३७१ सँग दुई करोड ठग्ने म्यानपावर सञ्चालक विनाधरौटी रिहा
काठमाडौं । सञ्चालकद्वारा आफ्नै कर्मचारीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा दर्ता नक्कली भिसा बनाएर ३ […]
यसरी छानिन्छन् राष्ट्रियसभा सांसद: वाम गठबन्धनले ४० सिट जित्ने अनुमान
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ४० सिट जित हात पार्ने देखिएको छ। प्रदेश २ बाहेक अन्यमा […]
काठमाडौँ । यस्तो छ प्रदेशगत रूपमा दलहरूको अवस्था प्रदेश १ : प्रदेश १ को जम्मा मतभार ९ हजार ३ सय […]
काठमाडौं । तातोपानी नाका खोल्नका लागि चिनियाँ पक्षले नेपालसँग सुरक्षाको प्रत्याभूति माग गरेको छ […]
प्रदेश प्रमुखहरुलाई कुन मर्यादाक्रममा राख्ने सरकार नै अलमलमा,के छ प्रमुखको भूमिका
अष्ट्रेलियामा मापदण्ड पूरा नगरेका कलेज बन्द गर्ने तयारी, कुन-कुन परे ? (नामावली सहित)
यी हुन् देशैभरका प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद (नामावलीसहित)